Ukuya eBarcelona - Ukuvakashelwa okubalulekile okufanele ukuphawule | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuvakashelwa okubalulekile lapho uhambela iBarcelona
USusana godoy | | Barcelona
Uzo hamba uye eBarcelona? Kungokunye ukuvakashelwa okuhlelwe kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezivakashi futhi-ke, asimangali. Ime njengedolobha lesibili elinabantu abaningi eSpain futhi kulo singathola amagugu ahlukahlukene enziwe ngendlela yesikhumbuzo kanye ne-gastronomy.
Ukuhlanganiswa kwakho konke lokhu kwenza kube ngamanye amaphuzu okufanele uvakashelwe. Ngakho-ke, uma ufika maduzane futhi ungazi ukuthi uzoqala ngaphi, sikushiya nokunye kwalokhu ukuvakasha okufanele ukwenze eBarcelona. Ezinye zalezo esizokhuluma ngazo ngamaGugu Omhlaba. Ngabe sizozithola?
1 Iya eBarcelona futhi uvakashele iSagrada Familia
2 ILas Rambas nesikhungo sayo esingokomlando
3 Indawo yaseGothic
4 IPaseo de Gracia namagugu ayo amakhulu
5 Ipaki yaseGuell
6 Jabulela ukubukwa okuhle kakhulu ezindaweni zokubuka
Iya eBarcelona futhi uvakashele iSagrada Familia
Okunye kokuma okuphoqelela kakhulu lapho uhambela iBarcelona yilokhu. Yaziwa ngabaningi futhi yathandwa yiningi, yile ndlela iSagrada Familia ekhuphuka ngayo. Lesi sonto singenye yamaphoyinti abalulekile futhi yadalwa ngu-Antonio Gaudí, njengoba abaningi benu bazi. Iqale emuva ngonyaka we-1882 kepha ibilokhu iqhubeka nokwakhiwa isikhathi eside. Esinye sezikhumbuzo ezivakashelwa kakhulu lapho kokubili ukwahlulelwa kokugcina nesihogo noma ukufa kumelwe ngaphandle. Ungayivakashela bese uthola amakholomu okuqala ngaphakathi.
ILas Rambas nesikhungo sayo esingokomlando
Kukhona izivakashi eziningi ezilungiselela ukuya eBarcelona, ​​ezivela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Iqiniso ngukuthi inenhlanganisela enhle kakhulu yezinto zokuhamba, phakathi kwayo indiza namanje eyintandokazi yabaningi. Lapho undiza futhi awufuni ukuba nakho izinkinga zokupaka noma izikhathi zokulinda, kuhlale kukhethwa ukuyidlala iphephile. Kanjani? Yebo, ukushiya imoto ku Ukupaka kwezindiza e-Barcelona. Ngakho-ke, uzoba nesikhathi sokuthokozela uhambo lwakho, okuyilokho okukhulunywa ngakho ngempela.
Ukuqala kulokhu, uma sisemhlabeni sibuyela ku isikhungo somlando. Enye yezingxenye ezivakashelwe kakhulu, phakathi kwayo siqokomisa iLas Ramblas, indawo ehamba phambili ehlanganisa itheku elidala kanye nesikhungo kanye nePlaza de Catalunya. Esigabeni ngasinye, uzokwazi ukuhlangana nabaculi basemgwaqweni, amatafula ahlukahlukene noma izitolo zekhofi, phakathi kwezinye izikhungo eziningi. Futhi ungakhohlwa ukuthi lapha ungabaza iGran Teatro Liceo, ngokwesibonelo.
Sishilo isikhungo salo, kepha manje ngendlela ebambekayo, sisele nenye yezindawo eziyingqayizivele nezikhethekile. Esinye sezici ezibalulekile zale ndawo ukuthi isenemininingwane evela enkathini yamaRoma, eyenza ukuthi ikhange nakakhulu. Kepha bekuyizikhathi zasendulo ezaziyilolonge nayo izigodlo zesitayela se-gothic. Kokubili i-cathedral yayo nemigwaqo yayo emincane izokwenza ulahleke kuyo futhi ikuthathe uphile inkathi edlule.
IPaseo de Gracia namagugu ayo amakhulu
Enye yezindlela ezibaluleke kakhulu, yize njengoba sibona, iBarcelona inamaphuzu amaningi. Kepha kulokhu, yimisebenzi yokwakha eyifaka inkanyezi. Isibonelo esihle sazo ukuthi lapha sithola iCasa Amatler noma iCasa Batló, nayo eyenziwe ngu-Antonio Gaudí nokuyisibonakaliso sasesikhathini saseCatalan. Ngakolunye uhlangothi, kukhona ifayela le- Indlu yaseMilá, eyayivela emndenini wonxiwankulu onophahla lwayo uhlobo oluthile lwamakholomu abukeka njengamaqhawe.
Le paki yomphakathi Amagugu Emhlaba. Kumele kuthiwe futhi kungumsebenzi kaGaudí kepha kulokhu kusuka esigabeni semvelo, okungukuthi, kusukela eminyakeni eyishumi yokuqala yekhulu lama-100. Inkululeko nokucabanga komculi kuhlangana ndawonye kwenye yezindawo ezibaluleke kakhulu. Sizohlukanisa kuwo, amadokodo okungena kanye nezitebhisi noma igumbi elibizwa ngeHypostyle Room (Igumbi lamakholomu ayi-XNUMX) elikhona ngaphambili. Ngaphandle kokukhohlwa isikwele nayo yonke imigwaqo eyenzayo.
Jabulela ukubukwa okuhle kakhulu ezindaweni zokubuka
Ngaphezu komakhelwane kanye namasonto ababhishobhi noma amasonto ngisho namapaki, kuyiqiniso futhi ukuthi uma sihamba, sithanda ukubuyisa izinkumbulo ezivela ezindaweni ezahlukene. Amaphuzu azohlala engukhiye uma sicabanga ukuthi imibono emihle ingatholwa kubo. Ngalesi sizathu, imibono ihlala ikhona. Ukuya eBarcelona kuyaqhubeka UMontjuic, 175 amamitha ukuphakama, noma ku- UTibidabo cishe ngamamitha angama-500. Yikuphi okuthanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuvakashelwa okubalulekile lapho uhambela iBarcelona
Yini ongayibona eMadeira